Taolana maina velombelona indray
"Ary hataoko ao anatinareo ny Fanahiko, dia ho velona hianareo, ary hamponeniko any amin'ny taninareo hianareo; ka dia ho fantatrareo fa Izaho Jehovah no efa niteny sady nahatanteraka izany, hoy Jehovah" - Ezek. 37:14.
Tsy ny olombelona no manisy fofon'aina. Ny Tompo Andriamanitry ny Isiraely no hanao izany anjara asa izany, mamelona ny toetra ara-panahy maty mba hihetsika. Tsy maintsy miditra ao anatin'ireo vatana tsy misy aina ny fofon'aina avy amin'i Jehovah Tompon'ny maro. Mandritra ny fitsarana, rehefa avela hihanjahanja ny zava-miafina rehetra, dia ho fantatra fa ny feon'Andriamanitra dia niteny tamin'ny alalan'ny olona, namoha ny feon'ny fieritreretana matory, nampihetsika ny fahaiza-manao tsy misy aina, ary nampihetsi-po ny mpanota ho amin'ny fibebahana sy fo torotoro ary famoizana ny fahotana. Koa ho hita mazava tsara ary fa tamin'ny alalan'ny olona, dia nozaraina tamin'ny fanahy ny finoana an'i Jesosy Kristy ary nofofonina ny fofon'aina ara-panahy avy any an-danitra izy raha iny izy maty tao anatin'ny faharatsiana sy fahotana iny, ary dia ny ny fofon'aina ara-panahy no namelona azy.
Tsy hoe ampiharina amin'izao tontolo izao ihany izany fakana sary an'ohatra mikasika ny taolana maina izany, fa amin'ireo izay notahina tamin'ny fahazavana lehibe ihany koa. Tahaka ny kàrana na taolam-balo any amin'ny lohasaha ihany koa ireo. Manana ny bikan'olona, firafitry ny vatana izy saingy tsy manana fofon'aina ara-panahy. Tsy ampy fotsiny ny hoe misy fifandanjana mirindra eo amin'ny tena sy ny firafitry ny endrika. Tsy maintsy mamelona ny tena ny fofon'aina mba hahafahany mijoro ary mihetsika avy hatrany. Izany taolana izany dia maneho ny taranak'i Isiraely, ny fiangonan'Andriamanitra, ary ny fanantenana ho an'ny fiangonana dia ny hery miasa mangina mamelombelon'ny Fanahy Masina. Tsy maintsy manisy fofon' aina ny taolana maina Andriamanitra mba ho velona izy ireo.
Tsy maintsy ao anatin'ny olona tsirairay avy ny Fanahin'Andriamanitra miaraka amin'ny heriny mamelombelona, mba hiasa ny nofo sy ny hozatra ara-panahy tsirairay. Raha tsy misy ny Fanahy Masina, raha tsy misy ny fofon'aina dia maty ny eritreritra, very ny fiainana ara-panahy. Maro amin'ireo maty ara-panahy no voasoratra ao amin'ny bokim-piangonana, saingy tsy voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana an'ny Zanak'Ondry. Mety ho miray amin'ny fiangonana izy ireo, kanefa tsy miray amin'Andriamanitra. Mety feno fitandremana izy ireo misahana andraikitra samihafa, ary mety ho hita fa olona mafana; saingy maro amin' izy ireo no "manana anarana ho velona (...), kanjo maty ihany" —Apok. 3:1. - SDABC, b. 4, ft. 1165,1166.